Hlola amaBourges, eFrance - World Tourism Portal
Hlola amaBourges, eFrance
Ongakubona eBourges, eFrance. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yamaBourges
Bukela ividiyo emayelana nama-Bourges
Hlola ama-Bourges idolobha esifundeni se-Center, France. Ukupaka iningi esikhungweni esingokomlando kufakwa metered. Kodwa-ke, kukhona amapaki amakhulu ezimoto mahhala ngaphandle kwesikhungo uma usukulungele ukuhamba imizuzu emihlanu. Isikhungo esingumlando sincane ngokwanele ukuba sizungeze, futhi yiyona ndlela enhle kakhulu yokuyibona.
Isonto lesonto laseSaint Etienne, indawo yamagugu ye-UNESCO, lisuka cishe nge-1200-1255. Kungumsebenzi omuhle kakhulu futhi wokuqala woqobo wokwakhiwa kweFrance Gothic, enamaphaseli aphindwe kabili naveve ende. Igcine cishe yonke ingilazi ebunjiwe yoqobo lwayo okufakwe kuyo, namanye amafasitela aphezulu wekwaya. Kukhona futhi amanye amafasitela athandeka kamuva kuma-chapels aseceleni. I-crypt nemibhoshongo kungavakashelwa ngemali eyengeziwe.
IPalais de Jacques Coeur yakhiwa kusuka ku-1443-1450 nguJacques Coeur, indoda ecebe kakhulu ku France futhi oyibhange kuCharles VII. Kungumsebenzi onamandla, ohlotshiswe kakhulu futhi opelwe izitebhisi zesitebhisi nangemibhoshongo njengazo izinqaba eziseTres Riches Heures du Duc de Berry - esinye isakhamuzi saseBourges. Ingaphakathi lingavakashelwa kuphela kuhambo oluqondisiwe, olwenzelwe lona inkokhelo.
IMarais, enyakatho yesikhungo somlando, iyindawo yezingadi zezabelo ezihlukaniswe ngemisele. Ukuhamba yonke indlela ukuzungeza kuzokuthatha amahora we-2-3 futhi kukunikeze ukubukwa okuhle kwesonto. Iya ngempelasonto futhi mhlawumbe uzobona abanye abalimi beqa imisele emigodini yabo.
Umuzi wonke ugcwele izindlu ezithandekayo, ezinye ngamapulangwe engxenye, ezinye zisetsheni elikhanyayo okuyisimo seBourges. IRue Bourbonnoux neRue Coursalon zikufanele kakhulu ukuvakashelwa.
IPalais des Echevins / I-Musee Esteve kungenye indawo enkulu ephakathi eboleka amagama ayo kuPalais Jacques Coeur, eyakhelwe i40 eminyakeni edlule.
UMuzie de Berry - imnyuziyamu yamahhala yamasiko endawo, kwenye indawo enkulu yangezikhathi zasendulo.
UMusee des Meilleurs Ouvriers de France - lesi sigcinamyuzi, esibhekene ne-Cathedral, sibonisa imisebenzi yobuciko eyenziwe yenziwa nge-diploma ye-MOF. Njengamanje inombukiso wemimese emihle eyenziwe ngesandla egumbini lokubonisa. Ukungena kwamahhala, futhi kufanelekile ukubukeka.
Kufanele uthathe uhambo lwesikebhe uzungeze iMarais.
Ungaya 'Plan d'eau' okuyichibi lokufakelwa ukuba ube ne-6km-walk. Kungenzeka futhi ukusebenzisa ibhayisekili lakho noma abagibeli bezungeza ngomgwaqo ohlukaniswe nomgwaqo - uyicaba.
Ngo-Ephreli, kunomkhosi womculo obizwa ngokuthi yi- 'Le Printemps de Bourges' lapho, phakathi nesonto le-1, kuzungezwe amakhonsathi we- "official" (amanani ahlukahlukene) edolobheni (ezindaweni ezahlukahlukene, kwesinye isikhathi ngasikhathi sinye). Uhlelo lunganqalwa ekuqaleni kukaMashi. Ngalesi sikhathi, iningi lama-pubs nemigoqo nakho kunama-band play (mahhala) futhi idolobha lonke lithola izithombe eziningi.
Iningi lezitolo zitholakala enkabeni yedolobha elethwe yi-rue Moyenne.
Enye yezinto ezikhethekile zeBourges amaHlathi okuluhlobo lwamaswidi. Ungakuthola 'ku-Maison de la Forestine' (etholakala eRoy Moyenne).
Isexwayiso! Cishe yonke into ivaliwe ngeSonto, yize uzothola izitolo zokudlela ezimbalwa ze-pizza e-Place Gordaine.
Beka i-Gordaine kanye nendawo emakethe ine-shawarma eshibhile, i-umzala, kanye nezindawo zokudlela eziningana zaseFrance. Izindawo eziningi ze-chi-chi kanye ne-Breton creperie enhle zingatholakala eRue Bourbonnoux.
Zizwe ukhululekile ukuhlola ama-Bourges nokuseduze ngamadolobha
Akukaze kwenzeke: Ama-Pilgrim ahambela ukuzonikela ngomzimba ongabonakali weSanta Bernadette esigodlweni lapho asuka eLourdes. Kukhona isitimela esiqondile se-TER kusuka eBourges kuya kwi-nevers (isikhathi sokuhamba ezungeze imizuzu ye-40).
Ama-Orléans: USt Joan wase-Arc wakhulula leli dolobhana futhi waziwa ngokuthi 'Defender of Orléans'. Vakashela iNdlu kaJoan wase-Arc kanye ne-Cathedral of the Holy Cross of Orléans. Kukhona isitimela sesifunda sase-TER esiqondile phakathi kweBourges ne-Orléans (isikhathi sokuhamba ezungeze i-1hr 15min).
Ukuvakasha: Vakashela i- châteauxesifundeni esizungezile. Kukhona isitimela esiqondile phakathi kweBourges and Tours (isikhathi sokuhamba sizungeza i-1hr 30min).